Hacking နှင့် Pentesting - သင်၏ GNU / Linux Distro ကိုဤtoရိယာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် IT | Linux မှ
အဆိုပါပေမယ့် hacking သေချာပေါက်ကွန်ပျူတာလယ်ကွင်းမဟုတ်ပါဘူး မင်္ဂလာပါ လုံးဝဖြစ်လျှင်။ သူ hacking သို့မဟုတ်ဖြစ်ခြင်း ဟက်ကာယင်းအစား၎င်းသည်ယေဘုယျဝေါဟာရဖြစ်ပြီး၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အတွေးအခေါ်နှင့်နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်သည်။ ပေမယ့်, ဒီခေတ်သစ်ကာလ၌အရာအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောရှိရာ အိုင်တီဒိုမိန်းကစဉ်းစားရန်ယုတ္တိရှိသည် ဟက်ကာ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ သဘာဝအားဖြင့်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့လာမှုများအားဖြင့်။
, ဟူသောဝေါဟာရကို မင်္ဂလာပါ သို့မဟုတ်ဖြစ်လိမ့်မည် ပင်တံတားအကယ်၍ ၎င်းသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်စပ်မှုရှိလျှင် အိုင်တီဒိုမိန်းအဓိကအားဖြင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအဓိကထားသောအထူးနှင့်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာအသုံးချမှုများအတွက်ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လိုအပ်သောအသုံးပြုမှုကိုပေးသည်။
အကြောင်းအရာနှင့်အပြည့်အဝမလေ့လာမီ၊ ယခင်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာပေ ၇ ခု၊ GNU / Linux ကိုအဆင့်မြင့်အသုံးပြုခြင်း အခြားအိုင်တီနယ်ပယ်များနှင့်လက်ရှိခေါင်းစဉ် ၃ ကိုဆိုလိုသည် Hacking / ဟက်ကာများနောက်ဆက်တွဲစာဖတ်ခြင်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ကြီးမားလွန်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်။
နှင့်သက်ဆိုင်သောအောက်ပါစာပမြေား GNU / Linux ကိုအဆင့်မြင့်အသုံးပြုခြင်း သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
နှင့်ဆက်စပ်သောအောက်ပါစာပမြေား Hacking / Hacker နယ်ပယ် သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
Linux အတွက်ထိပ်တန်း Hacking နှင့် Security Apps 11
1 Hacking နှင့် Pentesting - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ IT နယ်ပယ်
1.1 Hacking နှင့် Hacker
1.2 Pentesting နှင့်ပင်တဂွန်
2 ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux Distros များကို IT Hacking နှင့် Pentesting နှင့်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်နည်း။
2.1 Hack ခြင်းနှင့် Pentesting အတွက် GNU / Linux Distros
2.2 Hacking နှင့် Pentesting အတွက် GNU / Linux Distros Repositories ကိုတင်သွင်းပါ
Hacking နှင့် Pentesting - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ IT နယ်ပယ်
ကျနော်တို့ကအောက်ပါအသုံးအနှုန်းရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ် Hacking / Hacker နှင့်ဟူသောဝေါဟာရကို Pentesting / ပင်တဂွန် ထို့နောက်မေးခွန်း၏အဖြေကိုဖြေရန်လိုအပ်သောအကြံပေးချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များနှင့်အတူရှေ့ဆက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux Distros များကို IT Hacking နှင့် Pentesting နှင့်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်နည်း။
Hacking နှင့် Hacker
ကွန်ပြူတာပညာဖြင့်ပြောဆိုခြင်း၊ မျှတစွာလက်ခံနိုင်သောယေဘူယျအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် hacking es:
"ကွန်ပျူတာစနစ်များနှင့်ပတ်သက်သောအရာများ၊ သူတို့၏လုံခြုံရေးယန္တရားများ၊ အားနည်းချက်များ၊ ထိုအားနည်းချက်များအားမည်သို့အကျိုးရှိရှိအသုံးချရမည်နှင့်၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိသူများထံမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ယန္တရားများအားအမြဲတမ်းရှာဖွေခြင်း". Hacking, ကွဲအက်ခြင်းနှင့်အခြားအဓိပ္ပာယ်
အကျိုးဆက်တစ်ခု ဟက်ကာ အိုင်တီဆိုတာလူတစ်ယောက်ပါ။
"အားလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်လိုအပ်သောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်၎င်းတို့သည် ICTs များကိုမလွှဲမရှောင်သာ အသုံးပြု၍ လွှမ်းမိုးသည်၊ ဗဟုသုတရင်းမြစ်များနှင့်လက်ရှိထိန်းချုပ်မှုယန္တရားများ (လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နည်းပညာများ) ကိုထိရောက်ထိရောက်စွာရယူနိုင်ရန်လေ့ရှိသည်". Hacker ရဲ့လှုပ်ရှားမှု - လူနေမှုပုံစံစတဲ့နဲ့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ
ဤအတောအတွင်းသူ မင်္ဂလာပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကျဉ်းချုပ်နိုင်ပါတယ်:
"ပြင်ပတိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန်လက်ရှိဆုံးရှုံးမှုများ၊ အားနည်းချက်များနှင့်အခြားလုံခြုံရေးအမှားများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကွန်ပျူတာစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု။ ထို့အပြင် Pentesting သည်အမှန်တကယ် hacking ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပိုင်ရှင်များ၏သဘောတူညီချက်ကြောင့်အမှန်တကယ်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်းအပြင်၎င်းသည်လုံးဝတရားဝင်သည်။". pentesting ဆိုတာဘာလဲ။ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
ထို့ကြောင့် ပင်တံတား ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။
"ဘယ်သူ့အလုပ်ကကောင်းတဲ့စာမေးပွဲကိုသေချာစေသလဲ၊ စနစ်အတွင်းရှိအားနည်းချက်များနှင့်အားနည်းချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်နိုင်သမျှမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချို့သောလုပ်ငန်းစဉ်များ (သို့) အဆင့်များကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုမကြာခဏဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးစာရင်းစစ်ဟုခေါ်သည်". Pentesting ဆိုတာဘာလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux Distros များကို IT Hacking နှင့် Pentesting နှင့်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်နည်း။
Hack ခြင်းနှင့် Pentesting အတွက် GNU / Linux Distros
အကယ်စင်စစ်လက်ရှိတွင်များစွာသောရှိပါတယ် GNU / Linux Distros အထူးဆက်ကပ်အပ်နှံထား အိုင်တီဒိုမိန်း del hacking နှင့် မင်္ဂလာပါကဲ့သို့သော:
KaliDebian ကိုအခြေခံပြီး -> https://www.kali.org/
ကွကျတူရှေးDebian ကိုအခြေခံပြီး -> https://www.parrotlinux.org/
BackBox: Ubuntu ကို အခြေခံ၍ -> https://www.backbox.org/
ကာဣန: Ubuntu ကို အခြေခံ၍ -> https://www.caine-live.net/
နတ်ဆိုးDebian ကိုအခြေခံပြီး -> https://www.demonlinux.com/
Bugtraq: Ubuntu၊ Debian နှင့် OpenSUSE ကို အခြေခံ၍ -> http://www.bugtraq-apps.com/
ArchStrike: Arch အပေါ်အခြေခံပြီး -> https://archstrike.org/
BlackArch: Arch အပေါ် အခြေခံ၍ -> https://blackarch.org/
ပင်တူး: Gentoo အပေါ် အခြေခံ၍ -> https://www.pentoo.ch/
Fedora လုံခြုံရေးဓာတ်ခွဲခန်း: Fedora ကိုအခြေခံပြီး -> https://pagure.io/security-lab
WiFisLax: Slackware ကိုအခြေခံပြီး -> https://www.wifislax.com/
DracOS: LFS ကိုအခြေခံသည် (Linux မှခြစ်ရာ) -> https://dracos-linux.org/
ဆာမူရိုင်းဝက်ဘ်စမ်းသပ်မူဘောင်: Ubuntu ကို အခြေခံ၍ -> https://github.com/SamuraiWTF/samuraiwtf
ကွန်ယက်လုံခြုံရေးကိရိယာတန်ဆာပလာ: Fedora အပေါ် အခြေခံ၍ -> https://sourceforge.net/projects/nst/files/
DEFT: Ubuntu ကို အခြေခံ၍ -> http://na.mirror.garr.it/mirrors/deft/
ကြက်သွန်နီလုံခြုံရေး: Ubuntu ကို အခြေခံ၍ -> https://securityonion.net/
SantokuLFS ကိုအခြေခံသည် -> https://santoku-linux.com/
အခြားစွန့်ပစ်စီမံကိန်းများ: SpyRockBeini၊ XiaopanOS၊ Live Hacking၊ Blackbuntu၊ STD၊ NodeZero၊ Matriux, Ubnhd2 နှင့် PHLAK ။
Hacking နှင့် Pentesting အတွက် GNU / Linux Distros Repositories ကိုတင်သွင်းပါ
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အသုံးပြုကြသည် GNU / Linux Distros ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မိခင်များသို့မဟုတ်ရိုးရာတိုက်ရိုက် Debian၊ Ubuntu၊ Arch၊ Gentoo သို့မဟုတ် Fedora, ကြှနျုပျတို့သာ install လုပ်ဖို့ရှိသည် Hacking နှင့် Pentesting applications များ ငါတို့မှတဆင့် အထုပ်မန်နေဂျာ ပါဝင်သည်။
အစဉ်အလာ repositories အများစုတွင်ပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာများမပါ ၀ င်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ repositories တွင်ထည့်သွင်းရန်ရှိသည်။ GNU / Linux Distros ငါတို့ကိုအခြေခံတဲ့ညီမျှတဲ့အထူးအစီအစဉ်တွေပေါ့ Debian GNU / Linux ကျနော်တို့၏ repositories ကိုတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည် Kali နှင့်ကြက်တူရွေးဥပမာအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်။ ဟုတ်ပါတယ်, ၏အထုပ်ဗားရှင်းလေးစား Debian GNU / Linux ဤအထူးပြုဖြန့်ချီသူများနှင့်အတူပြန်လည်ပြင်ဆင်မရနိုင်သောအထုပ်များသို့မဟုတ် Operating System တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်တောက်ရန်။
တင်သွင်းဖို့ Kali repositories Debian တွင်အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြုလုပ်သင့်သည် -
အောက်ပါတို့ပါဝင်သည့် Distro ၏သင့်တော်သော repository ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်သို့ .list ဖိုင်အသစ်တွင်ထည့်သွင်းပါ။
အောက်ပါ command များကို အသုံးပြု၍ repositories မှတောင်းဆိုသောသော့များကိုထည့်ပါ။
တင်သွင်းဖို့ ကြက်တူရွေး repositories Debian တွင်အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြုလုပ်သင့်သည် -
ထိုနောက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်လူသိများသော၊ အကြိုက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုသာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် Hacking နှင့် Pentesting applications များ ဒီ repositories တွေထဲကတစ်ခုကငါတို့ကိုမချိုးဖောက်ဖို့ဂရုစိုက်တယ် Debian GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်။ ၏ကျန်သည် GNU / Linux Distros မိခင်များ (သို့) ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုအတူတူလုပ်သင့်သည် မုတ် အောက်ပါ အောက်ပါဥပမာ နှင့် BlackArch.
မဟုတ်ရင်, နောက်ဆုံး option ကိုဖြစ်လိမ့်မည်ကတည်းက ဒေါင်းလုပ် compile နှင့် install လုပ်ပါ တစ်ခုချင်းစီကို tool ကို၏ Hacking နှင့် Pentesting တစ်ခါတစ်ရံတွင်အကြံပြုသောသူတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှသီးခြားစီ။ မည်သူမဆိုမည်သည့်ကိရိယာကိုမျှမသိပါ Hacking နှင့် Pentesting သင်သိရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်သင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်, သင်သည်အောက်ပါကိုကလစ်နှိပ်ပါ link ကို စတင်ရန် တပ်ဆင်ရန်ရိုးရှင်းသောဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိပေမယ့်«Fsociety - အလွန်ကောင်းတဲ့ hacking tools တစ်ခု"။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «¿Cómo adaptar nuestras Distros GNU/Linux al ámbito TI del Hacking y el Pentesting?»ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်း (သို့) ပြင်ပသိုလှောင်ခန်းများမှတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ခြင်း (သို့) ရရှိနိုင်သည့်လွတ်လပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များစသည့်အမျိုးမျိုးသောနည်းစနစ်များသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်းသည်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Hacking နှင့် Pentesting - သင်၏ GNU / Linux Distro ကိုဤ IT နယ်ပယ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
Fedora / Centos / RHL သုံးစွဲသူများအတွက် Fedora သည် Security Lab လို့ခေါ်တဲ့လှည့်ဖျားမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်၎င်းမှသင် download လုပ်ယူနိုင်သည် https://labs.fedoraproject.org/en/security/
၎င်းသည် Kali ကဲ့သို့အပြည့်အ ၀ မစွမ်းဆောင်နိုင်သော်လည်းအသုံးအဆောင်အနည်းငယ်သာရှိသည်။
သို့မဟုတ်သင် Fedora ကိုသုံးပြီး terminal နှင့်၎င်းကိုထည့်ပါ
sudo dnf groupinstall "Lab မှလုံခြုံရေး"
သို့မဟုတ် repos တင်သွင်း centos မှ။
Fedoriano21 ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းတဲ့အလှူငွေ, သင့်မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
CWM, DWM, Enlightenment, EvilWM နှင့် EXWM: Linux အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ WM ၅ ခု